Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Nortal wuxuu ku leeyahay saamiga dadka laga tirada badan yahay Talgen
Nortal wuxuu galay heshiis dhammaystiran si uu u helo saamiga dadka laga tirada badan yahay ee bilowga badbaadada internetka Talgen si loo xoojiyo awoodaha amniga internetka loona furo fursadaha cusub ee Yurub, Waqooyiga Ameerika, iyo GCC.
Talgen waa shirkad ka shaqaysa amniga internetka oo diiradda saarta badbaadada hay'adaha iyo suuqyada difaaca. Shirkadu waxay u abuurtaa qalab iyo adeegyo ururada hogaamiya aduunka si ay isugu diyaariyaan la dagaalanka khataraha internetka iyo inay hubiyaan sii socoshada ganacsiga.
Sida laga soo xigtay Aasaasaha iyo Maamulaha Nortal, Priit Alamäe, tani waa maalgashi istiraatiiji ah oo ay shirkaddu ku ballaarineyso hoggaankeeda aagga amniga internetka, oo aad ugu qiimo badan macaamiisha hadda jirta iyo kuwa cusub ee Nortal. “Dawladaha iyo ururada caalamku waxay u baahan yihiin inay u diyaar garoobaan sidii wax looga qaban lahaa hanjabaadaha internetka ee sii murugsan, sidaa darteed waxaan aragnaa dalab iyo sidoo kale fursad tallaabadan,” ayuu yiri Alamäe.
“Iyada oo qayb ka ah iskaashigan istaraatiijiyadeed, waxaan dhisi doonnaa koox wada jir ah oo ka kooban khubaro ku xeel -dheer amniga internetka waxaanan u keenaynaa macaamiisheenna khibrad sare si looga caawiyo yareynta khataraha iyo hagaajinta adkeysiga,” ayuu raaciyay Alamäe.
“Maaddaama hanjabaadaha internetka ay qatar weyn u yihiin dhammaan ururada, nabadgelyada internetka ayaa ka mid ah mudnaanta sare iyo welwelka hoggaamiyayaasha iyo guddiyada ururada,” ayuu yiri Martin Ruubel, Maamulaha Talgen.
"Ururrada khasaaraha ee soo wajaha dhacdooyinka internetka ayaa sii kordhaya - qiyaasaha ugu dambeeyay ayaa tiradooda gaarsiiyey $ 6 tiriliyan oo caalami ah, sannadkan oo keliya - sidaa darteed muhiimadda awoodda hay'ad ee ka soo kabashada jebinta ama cilladdu waxay noqotaa mid muhiim ah," ayuu raaciyay Ruubel.
Sida laga soo xigtay Ruubel, tani waxay ka dhigan tahay in shaqada Talgen ee goobtan aadka muhiimka u ah ay tahay in la helo farsamada iyo aqoonta si loo hagaajiyo adkeysiga internetka ee ururada, taas oo awood u siineysa inay iska caabiyaan weerarada iyo sidoo kale inay yareeyaan khasaaraha haddii weeraradu dhacaan.
"Waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo qoyska ballaadhan ee Nortal oo aan galo iskaashigan istaraatiijiyadeed si aan uga faa'iidaysto labada hay'adood oo aan isugu geeyo kartidayada si aan u furno fursado cusub," ayuu raaciyay Ruubel.